Wasaaradda Caafimaadka oo Karantiishay Muwaadin Looga Shakiyay Coronavirus – Al-Hurriyah
Wasaaradda Cafimadka XFS ayaa sheegtay in ay karantiileen muwaadin Soomaaliyeed oo dhinac maray habraaca lagu hubiyo caafimaadka dadka ka yimaado wadamada caalamka ee soo gaaro dalka si looga taxadaro caafimaadka bulshadda .
Uqeyb-sanaha cafimaadka ee Wasaarada Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdirisaaq Yuusuf Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muwaadinka oo ka yimid dalka shiinaha uusan marin habraaca hubinta caafimadka dadka kasoo dagaya garoonka, sidaasi darteedna Wasaaradu ay gaysay goob loogu talagalay dadka oo lagu hubin doono caafimaadka qofka dhinac mara habracaan muddo 14 cish ah madama wadamada caalamka uu ku faafayo caabuqa karoona feyrus oo dhibaato ku hayo duniada.
Muwaadinka soomaliyeed oo 9-kii bishaan kasoo baxay dalka shiinaha ayaa soo maray Imaaraadka iyo Itoobiya oo uu taransid kusoo noqday waxaana markii uu garoonka Aadan cadde uu soo garay uu diiday in uu maro habraaca hubinta caafimaadka ee wasaaradu u diyaarisay in lagu koontaroolo ka hortaga caabuqa dunida ku faafay ee karoona .
Maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan ku riday ragg lala…
Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhan…
Ra’iisul Wasaaraha Jamahuuriyadda mudane; Xasan Cali Khayre ayaa Xafiiskiisa ku qaabbilay rugta ganacsiga Soomaaliyeed, isagoo kala hadlay sida la iskaga kaashan karo ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay inaysan…
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta sanad kadib dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, halkaasi oo sii diiran loogu soo dhoweeyey. Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland oo uu ugu horreeyo…
Guddi u xilsaarnaa Tirakoobka Shaqaalaha dowladda FS ayaa soo gabagabeeyay howlo la xiriiray sameynta xogo iyo kayd dhexe oo laga maamullo shaqaalaha dowladda. kaddib muddo toddobaadyo ah oo ay socdeen barnaamij loogu talagalay tirakoobkaasi, Ra'iisul…